Thursday, 02 February 2017 14:59	Rate this item
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा राजनीतिमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । पहिलो संविधानसभामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट समानुपातिक सभासद् बनेका शर्मा केन्द्रीय राजनीतिमा वीरगञ्जको उपस्थिति प्रभावकारी नहुँदा यो क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक विकासले अपेक्षित गति समात्न नसकेको मान्यता राख्छन् । २०३६ सालदेखि उद्यम र राजनीतिलाई समानान्तररूपमा अघि बढाएका उनले विगत १६ वर्षयता सङ्घमा आबद्ध भएर विभिन्न पदीय दायित्व पूरा गरिसकेका छन् । प्रस्तुत छ, वर्तमान आर्थिक अवस्था, बारा÷पर्सा क्षेत्रको उद्योग व्यापार, समस्या र सम्भाव्यताबारे शर्मासँग गरेको कुराकानी :
यसमा पनि समस्या छन् । सरकारले हामीसँग सुझाव लिन्छ । तर, अपेक्षित परिणाम आउँदैन । भइसकेकामा पनि तजविजी अधिकारले समस्या छ । सरकारले राजस्वका लागि व्यापारलाई बढावा दिएरमात्र हुँदैन । उद्योगलाई अघि बढाउनुपर्छ । यसबाट दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ । रोजगारी सृजना हुन्छ । विपे्रषणको भर पनि कम हुन सक्छ । अन्य देशको नीति हेर्न सकिन्छ । आफूलाई उपयुक्त हुने कर नीति बनाउनुपर्छ । सरकार र व्यवसायीको हितको मिलन कुन स्थानमा हुन सक्छ, त्यो पत्ता लगाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रविधिको मूल्य बढी छ । तर, हाम्रो बजार सानो छ । हामीकहाँ भारत र चीनले बजार जमाएको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? बिजुली सस्तो भए लागत घट्ने थियो । यसका लागि पनि विद्युत्मा लगानी बढाउनुपर्छ ।	Read 1074 times	Last modified on Thursday, 02 February 2017 15:12	Tweet
« मधेश विद्रोहको १० वर्ष पुरा, कति उपलब्धी कति चूनौती ? दिपेन्द्र झा, अधिवक्ता/अधिकारकर्मी	मभेस समस्या समाधान विना संविधान कार्यान्वयन हुदैन – नेता चौरासिया »